ASOOSAMA -DHARAA JAALALAA KUTAA 4FFAA -Hiriirsaa Jamaal – Beekan Guluma Erena
ASOOSAMA -DHARAA JAALALAA KUTAA 4FFAA -Hiriirsaa Jamaal	Beekan Guluma Erena
… Bakki sun daandii guddaa namni asii fi achi irra marmaran waan ta’eef, wal fudhanne, karaarraa maqnee, dahoo takka qabanne teenye. Bakka sanii namni tokko ‘ciriq’ hin jedhu. Waan sodaannu hin jiru jechuudha … Osoo haasofnu…Osoon guntuta ishee hooksuu miirri keessa koo danfe. Dhoohe ba’uuf waan deemu fakkaata. Ofkeessatti dhorkeen gadi qabuu dadhabe. Akkaan ta’u dhabnan ishee sossobachuuttin ka’e. “Tole”jette naaf hayyamuu didde. Irra deddeebi’een kadhadhe. Akka nama rakkoo hamtuun, lubbuu baaftu qabdettin , “Lubbuu na oolchi” jedhe itti waywaadhe … Ittu garaa natti jabaatte … Miira kankoos of keessatti ukkamsee dhorkuun humnaa ol natti ta’e. Waraansa isaa natti darbee, lafaa ol na fuudhuuf deema … Isheen yeroon tolaan kadhadhu na dinnan humnaniin itti deeme. Bakka tolli hin fayyadnetti humnatti gargaaramu jedheen dirqaaman itti deeme.
Waldhaansoo wal qabuu jalqabne. Dargaggeessa asheeta birraa quufee, wallaansoof dirreetti waliif ba’u taane. Asi achii wal oofna, akka korma horii walitti bu’ee … Isheenis naaf hayyamuu didde. Anis “hamman bakka ga’uu hin taa’uu” jedhee itti cicce … Amma xiqqoo malee irra aanuu ga’era. Isheen dadhabde. Onneen ishee akka malee dhahatti. Hafuurri ishee keessaa bahuu, midhaan tumame obdii jiru ni qulqulleessa. Kankoos akkasuma. Ho’ii qaama koo keessaa bahuu, uffata jiidhaa kan hin gogsine hin hafu …
Anis kan irraa hin laafnee ta’uu argite. Dubbiin cimuu yoo hubattu, humni ishees laafuu barteetti … Sagalee olkaaseen nama ofitti bimaachisa jechuuf, baay’ee na jaallatti. Kana waaniin beekuufin anu itti cimee bar … Dubartiin tooftaa (mala) waan tokko itti furtuu barbaacha fagoo hin deemtu. Garaa koo laaffisuuf, imimmaan akka bokkaa Arfaasaa ‘hururur’ goote, mallaa ishee irra lolaafte. Yeroon imimmaan ishee arguu, garaan koo bishaan na ta’e. “Maaloo! Ati fedhii ammaa malee, tan fuulduraa hin ilaaltuu? Daqiiqaa muraasaaf jettee yeroo gammachuu teenya tan jireenya keenyaa balleessitu, xiqqoollee sitti hin dhaga’amuu? “nan jette Moo”ikaan. Imimmaan ishee fi dubbiin ishee tun, walirra goranii miira koo dannabsan.
Akka gochaa kootiin silaa na bira hin turtu turte. Garuu, sana hin taasifne. Isaan imimmaan irraa buuse natti hin qabamne. Garaa qulqulluun na bira teessi … Ol jedheen ija ishee keessa ilaaluu dadhabe. Nin qaanfadhe. Hojiin hojjadhettin yeela’e … Gidduu keenya callinsi raroo buufatera. Ani itti dubbachuuf, namuma osoo hin argiin bofarra ejjetee, naasuun mudhiin gargar citteen ta’e. Mudhiin walitti na hin jirtu. Osoo dacheen baqaqxee yeroositti ofitti na fudhatte, irra naaf as aana. Isheenis garaa natti jabaatte. Samiinis ofitti ol na fudhachuu didde … Ka’ee fiiguun barbaade. Yeroon an lafaa ol ka’uu, Moo’ikaan harka qabdee lafatti na deebifte.“Maalii maal taate? Fayyaa hin qabduu? Moo natti muufatte? Yoo akkas ta’ees, taa’ii ni Marii’anna!” jettee of maddii na teessifte. Harka koo harka ishee lamaanin jabeessite qabde. Kaniin ishee dhiisee biraa deemu seete.
“Lubbuu koo an si dallansisuuf akkas hin goone. Maal seete? Wantii akka kanaa kun Rabbii biratti ta’ees nama birattis cubbuudha. Nuuf gaarii hin ta’u. Amma yoo waan kana eegalle, jaalala keenyaaf gufuu ta’uu bira darbee, jireenya keenya kan borii miidhuu danda’a. Kanaaf, osoo hamma mana tokkotti galluu, nutti hafee hin wayyuu?” nan jette Moo’ikaan. Dubbiin ishee tun ibidda bishaan itti bu’ee na goote. Salphatti na moote. Harka kenneraf. “Moo”ii too! Dhiifama naaf godhi? Balleessaaf akkaan akkas hin goone ni beekta. Miira keessa kootu of na wallaalchise. Yeroos of hin beeku, miira keessa galee waaniin jiruuf. Gochii koo kun hedduu na qaanesse. Ija tee dura dhaabbachuun sodaadhen deemuuf lafaa ol ka’e” ittiin jedhe. “Kun humaa tokkoo si hin qaanessin? Waan waliif beekuu qabnudha. Miirri akka si mo’ee jiru nan hubadha. Kanaaf, jedhee an homaa sitti hin dallanu! ” jette adda koo gubbaa na dhungatte. Naasuu keessaa as deeb’uu dinnan, harka ishee lameen natti marattee natti rarra’uu eegalte.
← KARAARRAA NUU MAQAA!-Bakkasaa Tumsaatiin!
NYAATAMA ILKAANII- Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa’tiin →